MASVIRIRO EKUTI MUKADZI HAAFI AKADA KUONA MUMWE MURUME FUTI KUNZE KWAKO (and akakuona uine mumwe mukadzi anouraya) – Vanoda Zvinhu
Rega ndibatsirane neavo vangade kuziva some of the ways dzekusvira nadzo dzinoita kuti mukadzi aite seakashandisirwa mushonga. Zvinorwadza kuti iwe wasvira wanakirwa wonzi nemukadzi “saka ndicho chii chamatiitira ichocho?”. Pamwe vakadzi havazotauri nemuromo asi mumoyo make. Izvozvo zvine njodzi futi because anongotsvaga zvikomba nerweseri. Pane zvakawanda zvekudzidza asi apa ndati titange nepadiki apa:
Zvinogoneka kuti mukadzi atunde kakawanda: 4 times kana kudarika. Zvinotanaga ne foreplay yakanaka, sezvo foreplay iriyo inoshanda se appetiser. Good foreplay inoita kuti mukadzi aite nzara uye shungu dzekusvirwa. Foreplay dziri pakawanda saka muzvikamu zvinotevera ndichatora nguva yekutaura nezve foreplay dzakasiyana siyana. Pari zvino ndichashandisa foreplay inotevera iyi pasviro yandicha tsanangura nhasi.
Iwe murume bvisa bhutsu ne shirt nekukurumidza, wosara ne trousers. Vakadzi vanofarira kuona chest yemurume saka apa unenge wamupa chance yekutarisa chest yako. Famba zvishoma ne zvishoma wakamutarisa mumaziso, uchiswedera kwaari. Mumbundikire, wotanga kupuruzira magaro ake zvinyoro nyoro asati atombobvisa hembe dzake. Isa maoko muhembe make wopuruzira magaro ake pamusoro pebhurugwa rake wobva watanga kumubvisa hembe dzake. Ita uchimukisa kisa zvishoma. Iwe chibva wabvisa trouse wosara ne underwear. Usakurumidze kuibvisa uye iye imbomusiya aine bhurukwa nebra rake. Usakurumidze waribvisa. Chimuradzika pa bed nekubva waita a deep kiss uchibata magaro zvakare.
Paunorega kukisa ibva watanga kubata mazamu zvishoma ne zvishoma, uchiita kuti minwe yako ipote ichikwenya nato (tits) dzake. Pakarepo chimubvisa bra nekubva waisa zamu one mukanwa, rimwe wakabata nerumwe ruwoko. Ipapo rumwe ruwoko runenge rwuchifamba famba pakati pemakumbo ake, mukati mezvidya nepamusoro pe bhurugwa, uchiita kunge kumu nyerekedza. Usashandise mazino pakuyamwa zamu. Shandisa malips ne rurimi. Mushure mechinguva chinja zamu rekuyamwa, wobva wapinza ruwoko mubhurugwa wotanga kutambisa matinji, kabinz nekusvika kumuromo webeche. Ipapo chirega kuyamwa wotanga kukisa nekunanzva uchienda kunzeve nemuromo, wokurumidza kudzika kuguvhu. Svika kumagaro zvekare neruoko rwuri mukati mebhurugwa. Ita uchiteerera mafemero aanenge ava kuita, nekakugomera gomera kuti uzive kuti woenda here pachinhanho chinotevera. Chibva wamubvisa bhurugwa, iwe wobva wabvisawo underwear yako, wosvitsa muromo wako pa matinji.
(Madyirwo ematinji ne kabinz anoda kutsanangurwa ne kuti vazhinji apa vanozoita zvinoita put off, kana kuti ivo vanotanga kusema nekuti havazive maitirwo azvo. Pazvikamu zvichatevera tichadzidzisanawo nemadzimai kuti vangageza sei zvinhu zvavo kuti zvichene uye zvipere mweya, kuti pave nerusununguko pamutambo uyu. Asi variko vakawanda vanogona kugeza vachichena kwazvo.)
Rurimi rwako ngarwutambise tambise matinji ruchikwenya kwenya kabinz zvekare. Shandisa rurimi nemalips chete. Kana matinji or kabinz zvazvimbirira, kana kuti mukadzi asisina kugadzikana nekuda kusvirwa, vhara mazino ako nemalips, zviya zvaunoita kana uchitamba nekamwana kacheche pakanoisa minwe yake mukanwa mako, iwe wonyebedzera kukaruma asi wakaviga mazino ako seri kwemalips ako. Ita sekuruma matinji nenzira iyoyo, uchiadhonza zvinyoro nyoro uye kuapressa nemalips ako zviri firm. Kana matinji akati kurei ita kuti rurimi rwako rwukwenye kwenye piece yematinji inenge iri mukanwa paunenge wakaruma marumire andataura. Ita izvi uchianhonga one, one then wozoadaro ese pamwechete. Itawo izvozvo kukabinz.
Paunenge uchiita izvi ita kuti rumwe ruwoko runge ruchitamba nenyato kumazamu uko, uku nerumwe ruoko uchifambisa fambisa zvigunwe pabeche, uchiita uchipinza nekuburitsa chigunwe one kana two mukati. Usarume matinji ne mazino chaiwo. Zvinorwadza.
At this stage anogona kutunda kamwechete kana kaviri. Uchenjere kuchemdza mwana wevaridzi…. Ko zvakaipei? Ndiko kuti kunakirwaka. Apa beche rake rinenge rava kuida kwazvo mboro but usamhanye. Dzokera kumazamu nemagaro uye ne kukisa. Unoita izvi because paanotunda paya anopera simba mbijana saka unofanira kumupa kanguva. Pedzisira nekuyamwa matinji zvekare asi not kumu tundisa this time. Just kumu heater. Chigadzirira kuipinza manje.
Paunenge wava kuda kupinza imbokwiza kabinz kacho nemusoro wemboro seuri kupotsa buri. Paunozopinza usaise yese. Koira zvinyoro nyoro, uye wakaisa musoro chete. Ziva kuti munhukadzi haangonakirwi kubeche chete during sex asi ne dzimwe nhengo dzemuviri kusanganisira ma tits, magaro uye matinji saka paunenge wapinza musoro chete ita kuti maoko ako abate bate zvinhu izvozvo, uchiteerera kuti chiri kumupa kuchemerera kwakanyanya ndechipi. Kana uchigona one hand should be pa one zamu, muromo wako on another, then rumwe ruoko pamatinji. Usakanganwe kupuruzirawo kana kuita eku gukuchira magaro. Apa chibva wati pinzisei but half chete, kwete yese. Uku uchikoira zvishoma nezvishoma. Allow her kutunda at least twice usati waipinza yese uchingoita zvandareva. Apa anenge ambotunda kare paunenge wamunanzva matinji usati waisa, saka anenge atosvitsa three or four orgasms kare. Paanotunda kechi 3 ikako usamhanyira kupinza yese kwacho. Iburitse yese panze woita seunotangazve foreplay. Anotanga kudziya panyowani, kuitira kuti aite recover from that orgasm.
Kana adziya chiisa yese but zvinyoro nyoro. Koira zvine kasimba mbijana kwete hasha too much. Ipapo chibvumira mukadzi to take control because she will be going for her final orgasm. Vamwe vavo at this point vanoda kuuya pamusoro. Allow her to do that. Vamwe havaende pamusoro but ndiye anenge ava muridzi weku koira ari pasi ipapo. Rega akoire iye asi iwe haubve wati zii. Koira zvekutevedzera zvaari kuda. This is because kukoira kwake ipapo anenge achitevedza kune G-spot yake. Ndiko kwaanenge achinangisa mboro painenge iri mukati. Iwe ziva zvekuyamwa mazamu nekupuruzira magaro (kana ari iye ari pamusoro) uye tuma small kisses. Chenjera kuti hauzokoira zviri out of order ukamu disappointa nekumutadzisa kui endesa paari kuda. Uchaona kuti anenge ava kufemera padenga uye kuita zvinesimba kana kuridza mhere. Paunoona kuti ava kuda kutunda mupe deep kiss, wakabata magaro. Usabvisa kiss kusvika apedza kutunda.
This fourth orgasm inenge iri very explosive. Kubva kuvhudzi kusvika kutsoka anenge ari magetsi ega ega. Iwe imbomira kutunda ipapo. Hold on. Siya atunde ega. Paanopedza kutunda chimira kukoira kuitira kuti iwe usatundewo, asi kiss ngairambe yakarumwa. What makes this orgasm very special is that inoitika because of touching the woman’s G-spot. That is the strongest of all orgasms anogona kuitwa nemukadzi. Imboti zii irimo ichiita kuvhita nekumira. Izvozvo anozvida chaizvo. Hazvina kunaka kukurumidza kuburitsa achangopedza kutunda.
[Unfortunately kune vakadzi vakawanda vasati vambosvika this type of orgasm. Vamwe vavo havatozive kuti kune this type of orgasm. Vajaira tuma orgasm tunenge twe bonyora. Kazhinji kacho zvinokonzerwa neku kurumidzisa kutunda kwatinoita, tobva tashaya simba rekusvitsa munhu patinofanira kumusvitsa. The problem is that kana akasangana ne murume anomusvitsa ipapo ka one, obva aziva kuti pasi pano pane zvakadai, hamugoni kumudzora. Vakadzi vanosangana ne experience ye orgasm iyoyi ka shoma kuti vazotamba vachiita bonyora netuma toys twekutenga. Anenge oti paafungira kukwirwa anenge otoda ari murume chaiye chaiye, kwete zvema rubber ekutenga kushop.]
After about a minute or two abva kutunda, chiizvomora, momboti pukutei zvimvura zviya zvekusvirana, paari nepauri. Then choose one of the following positions: kumupfugamisa kana kumukotamisa woisa nekumashure; kana kuti kana asiri mukobvu stereki ngaarare nemusana, osimudza makumbo ake mudenga. Paunopinda pakati pemakumbo ake ita kuti makumbo ake auye on your shoulders. It means kuti paunosvika pabeche pake makumbo ake anenge akakochekera on your shoulders, aka pushwa kuenda kumusoro kwake. Beche rinenge rakaita kuzviyanika kana kuti kuzvipereka in that position. Saka ndati zvinoda vasina muviri mukuru. Kune vamwe vakobvu asi vaine muviri uri flexible vanogonawo this position. Kana ari mumwe wevakadaro unofa zvako nekunakirwa. Ita kuti atambanudze maoko ake ese ari maviri semunhu ari pamuchinjikwa, iwe wobva waabata sezvinonzi uri kumurambidza kumuka zvenharo… holding her down on her wrists or palms, like you are pinning her down.
Ipapo chisvira semurume manje, whether waisa neshure or “zvemakumbo pama shoulders”. Chiita zvekurova nekusakadza nyini, uchienda mberi nekudzoka shure (deep thrusts), uye kumboramba wakaisa mberi mberi uchiita ma short movements, usingapi beche mukana wekupinda mhepo. Pamwe pacho ita seunoitenderedza mukati imomo, kana kuita seuri kukokota mu cup ne spoon. Kana ukagona kusvira nguva yakati rebeyi usati watunda mukadzi anoita another bonus orgasm and iyoyi she will respect you for it, but its not easy ipapo because anenge ava weak, but kunakirwa anenge achiita seacha pesana pfungwa mwanasikana. Mutarise mumaziso chaimo wakaita ka kufinyama paunenge uchiita zvese izvi. Ratidza face iri serious, kunge une twuhasha mbichana. Kana akada kunzvengesa meso ake mubate matama udzore meso ake kwauri. Ipapo anenge ochema chema kunge achakumbira ruregerero. Iwe chibva waitawo seunomupindura uchitaura zviri romantic nezwi rechirume, sekuti “aika mai mwana, siya ndiite madiro naro, handiti wandipa rese here? Rega ndirove chinhu ichi, ndikugadzirire size yako”, Uye mamwewo mashoko ehubaba. Pa position iyoyi zviri nyore kugumha chibereko, especially kana une yakati rebei. Vamwe vanonakirwa nekugumwa chibereko asi vamwe vanorwadziwa, but hazvitadzise kukoira pamadiro. Edza kuita zviri hard and zviine speed paunenge woda kutunda. Ita uchirova pa G-spot chete chete kuma dying minutes iwaya to increase the chances of another G-spot orgasm. (That is kana uchiziva pairi G-spot yacho. Ndichakudzidzisai later kuti inotsvagwa sei.) Kana ukaona apicka zvekuti anogona kuita orgasm ipapa edza kuti muite orgasm pamwe chete (Apa anotoiridza chete mhere kana akawana a second G-spot orgasm. Uchenjere kubva wamufendesa pakadai.) kana kumurega akutangire futi orgasm yacho. This is very important because kana ukamutangira unenge wadenha nyaya hombe. Zvinenge zvava kureva kuti wamusiira panzira and vanhu vacho havazvide. Apa unenge waneta manje because basa unenge wabata.
Pakunotunda paya ibva waruma kiss hobvu. Usakurumidze kuburitsa mboro kana watunda. Chaunotanga kubvisa ikiss, womborega mboro irimo uchimupuruzira mhanza nematama seunobvisa dikita, kana kufambisa kachigunwe pamhuno yake, nekuita sekunge uri kumupukuta misodzi. Womuudzawo mashoko erudo. Ipapo chizvomora hako mboro.
Kana ari mukadzi akarairwa kwaakabva anoziva zvekuita nekukurumidza pano buritswa mboro.
Kana wasarudza position yekuisa nekumashure mutsauko ndewekuti haukwanisi kumutarisa kumeso. Asi unenge uine advantage yezvimwewo zvakawanda, sekutambisa mazamu, zvikuru sei nyatso dzake, uchiita ekusvoverera nekuti anenge akarembera. Ukuwo unenge uchisvoverera matinji ne kabinz (gongo), wakaita zvekumonerera maoko ako muchiuno chake, kana kumuita kuti asimudze rimwe gumbo otsika pa bed, kuti uwane mukana wekusvikira matinji nekabinz painenge yakapinda.
Maitiro: Ita wekukotamisa pa side pebed, akaita sekusimudza magaro mudenga uye makumbo akati vhurikei. Nyini inobva yauya yese kuseri kwauri ikoko. Ita mboro ye kubatira muruwoko woivhura musoro wayo zvakakwana, (kuinzvonyora) womboita seuri kunyemudza beche nemboro, musoro uchiti ukati kwizei kwizei kabinz woti pindei, bude, pindei, bude. Ita sekuvhura beche neminwe ye one hand rumwe rwakabata mboro se hose pipe. Chipinza mboro yese kusvika yaguma kuti ndi. Yava nguva yekusvira manje.
Chiita zvekurova nekusakadza nyini, uchienda mberi nekudzoka shure (deep thrusts), uye kumboramba wakaisa mberi mberi uchiita ma short movements, usingapi beche mukana wekupinda mhepo. Pamwe pacho ita seunoitenderedza mukati imomo, kana kuita seuri kukokota mu cup ne spoon. Kana ukagona kusvira nguva yakati rebeyi usati watunda mukadzi anoita another bonus orgasm. In that position itawo uchipuruzira magaro. Akange ava kuchena chema chema kwazvo nekunakirwa iwe taurawo sezvandareva kare zveubaba. Chiita zviri hard ne more and more speed paunenge woda kutunda. Chibva wadira hako hwese hurume maari pamadiro.
Kana muri kuita zvenhumbu uye uine mhando ye mwana yauri kuda tevedzera zvinotevera: Kana uchida a girl, iburitse wodira hurume hwako wakapinza musoro chete, just about 3cm to 4cm. Kana uri kuda a boy pinza yese kusvika kumagumo wochidira zvako hurume whacho. END OF FIRST ROUND.
Chimbozororai kuitira second round pa next two or three hours. After second round morara zvenyu. Third round mozoiwona kuma 5am or 6am.
(Mukandibvunza ndinokuudzai later the science behind kuita boy or girl zvandataura)
NB. Please onai kuti paunenge uri pamusoro pemumwe wako hauite zvekumu tsimbirira. Usaite zvekurarira munhu.
Uye zivai kuti mushonga wazvo zvese kugeza. Vakadzi shandisai sipo dze deep cleansing kugeza mukosho nepakati pezvidya. Kunyanya dziri antibacterial. Sipo dzemazuva ese idzi hadzipedze kunhuwa kwenyini nemikosho. Ukada zvekuzo shandisa these special soaps kugeza apo wava kuda kukwirwa chete mweya wacho hauperi. Kana uchida kuti mweya uyu upere geza kaviri pazuva uchishandisa sipo idzodzi pese paunogeza. Geza mangwanani nemanheru.
Pazvikamu zvinotevera tichataurawo nezve zvingaitwe nemadzimai kutenderedza pfungwa dzaana baba nekunakirwa pabonde nezvimwewo zvakasiyana siyana zvakakosha zvinoenderana nebonde. Tiri kudzidzisana zvebonde remudzimba kwete zvechifambi kana ma small house. Saka ndisiri kutaura zvema condoms. Bye bye.
· Last modified August 20, 2015 1
· Last modified November 20, 2013 Pingback: 24 hour bike ride()
Next story I dont feel sorry for Stunner: Pokello takes a dig at former boyfriend
Previous story Dhuma Dhuma nebeche ndakutopinda mudhorobha